ETshayina Ngexabiso Elihle kakhulu SC(B)10 uhlobo olomileyo lwesiguquli esinemilinganiselo yobuchule Ababoneleli-shengte abavelisi nabanikezeli |Shengte
Ixabiso Elihle kakhulu i-SC(B) i-10 eyomileyo-uhlobo lwe-transformer kunye neeparitha zobugcisa Umthengisi-shengte
Ilahleko ephantsi, ukukhutshwa okuncinci okuncinci, ingxolo ephantsi, ukutshatyalaliswa kobushushu obunamandla, i-120% ihlelwe umsebenzi womthwalo phantsi kweemeko zokupholisa umoya.
Ukusebenza kakuhle kobumanzi.Inokusebenza ngokuqhelekileyo phantsi kwe-100% yokufuma.Inokufakwa ekusebenzeni ngaphandle kokumisa kwangaphambili emva kokuvalwa.
Ukusebenza okukhuselekileyo, okungenakutsha kunye nobungqina bomlilo, ukungcola, kunokufakwa ngokuthe ngqo kwiziko lomthwalo.
Ixhotywe ngenkqubo yokulawula ubushushu obugqibeleleyo ukubonelela ngesiqinisekiso esithembekileyo sokusebenza ngokukhuselekileyo kweenguqu.
Ugcino-free, ufakelo olulula, ixabiso eliphantsi elibanzi lokusebenza.
Ukuthembeka okuphezulu.Ngokutsho kophando malunga nokusebenza kweemveliso ezifakwe ekusebenzeni, ukuthembeka kweemveliso kuye kwafikelela kwinqanaba eliphezulu lamazwe ngamazwe.
I-Epoxy resin cast SC (B) 10, SC (B) 11-50 ~ 2500 series resin insulated dry power transformer, ilungele iihotele, izakhiwo eziphakamileyo, amaziko orhwebo, iindawo zokuhlala, iindawo zezemidlalo, izityalo zepetrochemical, izikhululo zeenqwelo moya, amazibuko, kaloliwe, njl.
1. Ingxolo ephantsi: uyilo olufanelekileyo lwesekethe yamagnetic kunye nokukhethwa komgangatho ophezulu we-silicone epholileyo epholileyo ephothiweyo, i-oblique epheleleyo ye-oblique yesine seam step lamination, inkqubo yokudibanisa idrafti ekhethekileyo yokunciphisa, ngoko inqanaba lengxolo lingaphantsi komgangatho wesizwe.
2. Ukukhutshwa kwendawo: ikhoyili ithatha iteknoloji yokuphosa yamazwe ngamazwe yakutshanje, ukwenzela ukuba i-resin igalelwe phantsi kwe-vacuum kunye noxinzelelo.Ukukhutshwa kwendawo kuncinci, okunokuqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo kwexesha elide phantsi kombane osebenzayo.
3. Ukukwazi okunamandla okuxhathisa isiphaluka esifutshane ngequbuliso: ikhoyili esetyenziselwa ukupakisha isakhiwo se-epoxy glass fibers, i-vacuum egalela iileya ezijikelezayo, ukujika-ukujika kwi-resin, emva kokunyanga, ikhoyili ukwenza amandla aphezulu omzimba oqinileyo, kunye nokusebenzisa i-coil. isakhiwo ipleyiti kunye ibhloko positioning indlela phezulu nasezantsi, ukuqinisekisa isiguquli amandla oomatshini lilonke, ukwenza iimveliso babe nekhono eliphezulu elifutshane elifutshane.
4. Ukuchasana kwempembelelo enamandla: isakhiwo esikhethekileyo sesetyhula kunye nesakhiwo se-foil samkelwa kwiqela lokugalela, elinokunciphisa umbane phakathi kweengqimba, ukuphucula ukuhanjiswa kwentsimi yombane, kwaye ibe namandla okumelana nempembelelo yombane.
I-SC (B) i-10 iiparamitha zobugcisa ze-transformer eyomileyo
Umzekelo uk% Ilahleko yomoya (w) Ilahleko (120C) (W) 0.1 I-LPA(AN)DB Ubungakanani mm Iyonke (kg) Itheminali yombane ophantsi
Iimpawu zobuchwephesha be-S(B)H15-M-30~1600/10/0.4 uthotho lwe-amorphous alloy distribution transformers
Ngaphambili: Ixabiso Elihle kakhulu DFW-12 Ikhebula yeSebe Lebhokisi Umboneleli-shengte
Okulandelayo: isiguquli sodidi olomileyo